Mogadishu Journal » C/llaahi Sheekh Xassan” Madaxweynaha iyo xubnaha wasiirrada la socday magaalada Marka cayaar-cayaar iyo dalxiis ayeey u tageen
C/llaahi Sheekh Xassan” Madaxweynaha iyo xubnaha wasiirrada la socday magaalada Marka cayaar-cayaar iyo dalxiis ayeey u tageen
Mjournal : — C/llaahi Sheekh Xassan oo ah guddoomiyaha xisbiga nabada iyo dimuquraadiyada islamarkaana siweyn u dhaliila siyaasada dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xassan Sheekh Ma’uud ayaa isaga oo ka hadllayay safarkii uu dhawaan madaxweynaha ku tagay degmada Marka waxaa uu ku sheegay in uu ahaa mid cayaar-cayaar iyo dalxiis ku saleysnaa, laakiin madaxweynaha iyo wasiirrada la socday aysan wax howl Qaran ah u tagi magaalada Marka.
Waxaa uu C/llaahi Sheekh Xassan wax lala yaabo ku tilmaamay in mas’uuliyiintii dalka in ay meel xeeb ah isaga damaashaadaan, iyadoo dalka ku jiro xaalad adag, isagoo soo hadal qaaday weerarkii lagu qaaday wafdiga madaxweynaha ee Marka ku sii jeeday.
“Annaga waxaan u arkeynaa safarkii magaalada Marka in uu ahaa dalxiisa iyo damaashaad madaxweynaha iyo wasiirradiisa u tageen xeebta Marka, wax howl ah oo halkaa laga soo qabtay ma jirto oo aan aheyn in lagu damaasho oo kaliya xeebta magaalada Marka,” ayuu yiri C/llaahi Sheekh Xassan.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud iyo xubno ka tirsan gollaha wasiirrada oo ay ka mid yihiin wasiirrka arrimaha gudaha iyo gaashaandhiga ayaa la arkayay iyaga oo ku dabaalanaya xeebta magaalada Marka kadib markii ay dhawaan gaareen halkaa.
Dhinaca kale waxaa uu C/llaahi Sheekh Xassan soo hadal qaaday sababta keentay in madaxweyne Xassan Sheekh diyaar looga soo qaado Magaalada Marka isaga oo intaa ku fasiray baqdin uu ka qabay weerar uga yimaada dhinaca Al-shabaab.
“Waxaa rabaa in aan wasiirrka arrimaha gudaha ku sheego dadka ma’aha dad jaahil ah wax walba waa ay la socdaan, wax lala yaabo ayeey aheyd in aad tiraahdo safarkeenii ayaa guul ku soo dhamaaday,” iyadoo Helicopter wafdigii Madaxweynaha looga soo qaado Marka, islamarkaana gadiidkii uu ku safray mar kale jidka loo galay”ayuu mar kale yiri C/llaahi Sheekh Xasan.
Madaxweyne Xassan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dhawaan safar hal maalin qaatay ku tagay magaalada Marka, waxaana wafdiga Madaxweynaha ay ku dabaasheen xeebta Marka, iyagoo aad u dhoola cadeyayay, waxaana siyaasiyiinta dhaliilsan dowladda ay sheegaan in mudadii sanadka aanay waxba qaban, isla markaana amaanka uu yahay mid faraha ka sii baxaya.
Nicholas Kay oo rajo badan ka muujiyay shirka maanta ka furmaya magaalada Brussels